यस्ती रानी जाे यौन सम्पर्कपछि प्रेमिलाई जिउँदै जलाउँथिन् ! « Janata Samachar
यस्ती रानी जाे यौन सम्पर्कपछि प्रेमिलाई जिउँदै जलाउँथिन् !
एजेन्सी । इतिहासका पुस्तक पढ्ने हो भने अफ्रिकी मुलुक अंगोलाकी रानी एनजिंगा एमबांदी बहादुर तथा तेज मस्तिष्क भएकी योद्धाका रुपमा चिनिएकी छिन् । जसले १७ औँ शताब्दीमा अफ्रिकामा युरोपेली उपनिवेशविरुद्ध युद्ध लडेकी थिइन् । तर कतिपयले उनलाई एक क्रुर महिलाका रुपमा पनि हेर्न गर्दछन् । उनले सत्ताका लागि आफ्नै भाइलाई मृत्युको घाटसम्म पुर्‍याइन् । त्यति मात्रै होइन, उनले पुरुषहरुसँग यौन सम्बन्ध राखेपछि उनीहरुलाई जिउँदै जलाइदिन्थिन् । यति हुँदाहुँदै पनि इतिहासकारहरु एउटा कुरामा एक मत छन् कि रानी एनजिंगा अफ्रिकामा रुचाइएका महिलाहरुमध्येकी एक हुन् ।
एमबांदू समुदायकी नेता एनजिंगा दक्षिण पश्चिम अफ्रिकी देश एनदोंगो तथा मतांबाकी रानी थिइन् । तर स्थानीय किमबांदु भाषामा एनजिंगालाई एनगोला भन्ने गरिन्थ्यो । यो पुर्तगाली शब्द थियो । पछि यो क्षेत्रलाई नै अंगोला भन्न थालियो । यो इलाकाको नाम अंगोला पोर्चुगलका सैनिकले सुन र चाँदीको खोजीमा एनदोंगोमा आक्रमण गरेपछि मात्रै रहन गएको हो । जब उनीहरुले सुन र चाँदी पाएनन् । उनीहरुले ब्राजिललाई उपनिवेश बनाउँदै मजदुरहरुसँग व्यापार गर्न थाले । एनजिंगाको जन्म पोर्चुगलको आक्रमणको आठ वर्षपछि भएको थियो । उनले आफ्ना बुवा राजा एमबांदी किलुंजीसँगै बाल्यकालदेखि नै आक्रमणकारीहरुसँग सर्षघ गर्न थालेकी थिइन्। सन् १६१७ मा जब राजा एमबांदीको मृत्यु भयो उनका छोरा एनगोला एमबांदीले सत्ताको बागडोर सम्हाले । तर उनीसँग बुवामा भएको चातुर्यता तथा बहिनीको जस्तो बुद्धी थिएन । एनगोला एमबांदीलाई यो डर थियो कि उनकी बहिनीका मान्छेले नै उनीविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । त्यसैले एनगोलाले एनजिंगाका छोरालाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरे । तर नयाँ राजा नै युरोपेली आक्रमणको सामना गर्न असफल हुँदै गएको अवस्थाा एनगोला एमबांदीले आफ्ना करिबीहरुको सल्लाह माने ।
पोर्चुगलकी लेखिका जोस एडुआर्डो अगुआलासा भन्छिन्, ‘रानी एनजिंगा युद्ध भूमिमा एक महान योद्धा मात्रै थिइनन्, उनी एक महान रणनीतिकार तथा कुटनीतिज्ञ पनि थिइन् ।’ उनी पोर्चुगलविरुद्ध लडिन् । हल्याण्डसँग मित्रता कायम गरिन् । त्यस्तै अरु कुनै मुलुकसँग लड्नु परेमा फेरि पोर्चुगलसँगै सहयोग लिन पनि उनी पछि हट्दिनथिन् । यौन दासीको प्रसंग